၁၉၈၇ ခုနှစ် မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ကို ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ လင်္ကာတိုလေးတစ်ခုကို အမိအရမှတ်သားရပါတယ်။ “ကိုသီတိုက်သစ်က” တဲ့။ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဖုန်းနံပါတ်လေးပါ။ အက္ခရာသင်္ကေတအရ ၂၆၇၆၂ ။ သဘာဝကျတဲ့မှတ်သားချက်လေးပါပဲ။ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဘွဲ့တော်က ဦးသီရိန္ဒမို့ “ကိုသီ(ဦးသီရိန္ဒ) တိုက်သစ်က(မစိုးရိမ်တိုက်သစ်က)။” ဖုန်းနံပါတ် ၂၆၇၆၂ ။
ခုချိန်ထိလည်း “ကိုသီတိုက်သစ်က”ဆိုတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်(၂၆၇၆၂) လေးက လွန်တော်မူရှာပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာ တော်ကြီးရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကို အောက်မေ့အမှတ်ရဖွယ် မြတ်နိုးစရာဝေါဟာရလေးအဖြစ်စွဲထင်နေပါသေး တယ်။ စာသင်သားတွေ အချင်းချင်းတွေ့ဆုံမိတ်ဖွဲ့ကြတဲ့အခါ လိပ်စာအပြန်အလှန်လှဲလှယ်ကြပြီဆိုရင် “ကိုသီ တိုက်သစ်က” ဆိုတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးရတော့တာပါ။
သူမစိုးရိမ်တိုက်သစ်ကို ရောက်ဦးစနှစ်တွေမှာ သံဃာတော်ငါးရာကျော်(ခုသုံးထောင်ကျော်)သီတင်းသုံးနေတဲ့ နာမည်ကျော်စာသင်တိုက်ကြီးရဲ့ တစ်လုံးတည်းသောဖုန်းလေးပါပဲ။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ ပိတ်ရင်း ဖွင့်ရင်းနဲ့ မပွင့်တပွင့်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ကမ္ဘာနဲ့ မပြိုင်နိုင်သေးပေမယ့် ယခင် မန္တလေးထက် နှာတစ်ဖျား သာခဲ့ပြီဆိုတာ သေချာနေမှာပါ။ ဟိုတုန်းကတော့ ဖုန်းလေးတစ်လုံးတည်း။ မစိုးရိမ်သွေးနဲ့ နီးသူတွေ ရဲ့ ရင်ထဲမှာ “ကိုသီတိုက်သစ်က”၊ဖုန်းနံပါတ်၂၆၇၆၂။
ရှေးခေတ်မြန်မာမှုနယ်ပယ်နဲ့ သာသနာတော်လောကမှာ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို မှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါ အရေအတွက်ဂဏန်းနံပါတ်တွေကို အက္ခရာသင်္ကေတတွေနဲ့ အလွယ်မှတ်သားလေ့ရှိဖူးပါတယ်။ “အုတ်ကျစ် ကျော်အေး၊ မန္တလေး”“ လှည်းဝင်ရိုးသံ၊ တညံည၊ံ ပုဂံဘုရားပေါင်း။”ဆိုတာမျိုးလေးတွေပါ။ မမေ့တော့ဘူးပ။
မန္တလေးသာသနာ့တက္ကသိုလ်နေ့ရက်တွေဆီက မိတ်ဆွေရဟန်းတော်တစ်ပါးကိုလည်း အမှတ်ရနေမိပါသေး တယ်။ သာသနာ့တက္ကသိုလ်ပြဌာန်းကျမ်းစာတွေထဲက ပိဋကတ်စာပေသမိုင်းသင်ရတဲ့အခါ ကျမ်းပြုဆရာတော် တွေရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိမှာပါတဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်နဲ့ ကျမ်းပြုနှစ်၊ ကျမ်းပြီးနှစ်တွေ မှတ်ဖို့ ကြိုးစားရပါတယ်။ စာမေးပွဲနီးပြီ ဆိုရင် သက္ကရာဇ်မှတ် အတိုကောက်သင်္ကေတစာတိုလေးတွေ ပလူပျံအောင် ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်မှတ် တတ်သလို အာတွေ့သလို သင်္ကေတလင်္ကာလေးတွေ စာချိုးလေးတွေ ရေးပြီးတော့ မှတ်ကြတာပါ။ ရဟန်းတော် များရဲ့ စာကျက်နည်းတစ်မျိုးပါပဲ။
သူ့မိတ်ဆွေရဟန်းတော်ကတော့ စာတွေမှတ်သားတဲ့အခါ ငယ်သံယောဇဉ်နာမည်လေးတစ်ခုကို ပင်တိုင်ထားပြီး အသုံးပြုလေ့ရှိ ပါတယ်။ အေးအေးမာဆိုတဲ့ ငယ်ကျွမ်းဆွေလေးက ပိဋကတ်စာပေ သမိုင်းမှတ်စုရဲ့ အထင်ရှားဆုံးနာမည်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ “အေးအေးမာမာ၊ မိတ္ထှီလာ ၊ ရွာမှာသပြေကုန်း” ဆိုတာမျိုးပါ။ ပဉ္စမသံဂါယနာပွဲတော်မှာ အကြီးအမှူးဆရာတော် အဖြစ်ဆောင်ရွက် တော်မူခဲ့တဲ့ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး အကိုးကွယ်ခံဘုရားကြီးဆရာ တော်ရဲ့ မွေးနှစ်နဲ့ ဇာတိရွာအကြောင်းလို့ ထင်ပါတယ်။ ၁၁၅၅ ခုနှစ် မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ သပြေကုန်းဆိုတဲ့ရွာလေးမှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်ပေါ့။ (အေး=၁၊အေး=၁၊ မာ=၅၊မာ=၅)။
သင်ရတဲ့ပိဋကတ်စာပေသမိုင်းထဲမှာ သက္ကရာဇ် ၁၁၀၀ နှောင်းပိုင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကုန်းဘောင်ခေတ် စာဆိုတွေရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိတွေကို ကျက်မှတ်ရတဲ့အခါ မိတ်ဆွေရဟန်းတော်က သူ့စိတ်ကြိုက်(၁) ဂဏန်းတွေကို “အေး” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ အစားထိုးဖို့ ကြိုးစားတော့တာပါ။ “ဥသြအော်မည် ကုန်းဘောင်တည်” ဆိုတာ ကိုတောင် “ အေးသုံးခါ၊ မာတစ်ချက်၊ ကုန်းဘောင် တည်ပန္နက်။” ဆိုတာမျိုး လုပ်ခဲ့တဲ့အထိ ဥပါဒါန် မှတ်စုလေးပြုစု ခဲ့ရှာပါသေးတယ်။ ခုတော့ ပြုစုသူမိတ်ဆွေရဟန်းတော်လည်း ဈာန်သမာပတ်ကစားရင်း စွန်ကြိုးနဲ့ ထိလို့ ပြတ်ကျသွားရှာပါပြီ။
ဒီလပိုင်းအတွင်း တိဘက်တက္ကသိုလ်မှာ ပါဠိသင်တန်းစဖွင့်တော့ သင်တန်းမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အမည်ပေး ပုံ ဓလေ့ထုံးတမ်းလေးအကြောင်း မိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ပါဠိအက္ခရာတွေကို ရေးချပြရင်းနဲ့ပါ။ ရွှေပြည်ကြီးစီတီဇင် တွေကတော့ နေ့နံသင့်နာမည်ပေးပုံတွေကို ကျွမ်းဝင်ပြီး သားမို့ ရှင်းပြဖွယ်မလိုပေဘူးပ။ တိဘက် တက္ကသိုလ် စာသင်ခန်းထဲက တပည့်သာဝကတွေကိုတော့ သေသေချာချာရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်။ သာဝကလေးတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားကြတယ်။
အ အာ ဣ ဤ ဥ ဦ ဧ သြ= တနင်္ဂနွေနေ့
က ခ ဂ ဃ င= တနင်္လာနေ့
စ ဆ ဇ ဈ ည=အင်္ဂါနေ့
ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ တ ထ ဒ ဓ န= စနေနေ့
ပ ဖ ဗ ဘ မ=ကြာသပတေးနေ့
သ ဟ =သောကြာ
( အင်း ခုမှပဲ လက်ကွက်ပြန်ကျင့်ပြီးသားဖြစ်တော့တယ်)
ဒါပေမယ့် အမေးအမြန်းထူတတ်တဲ့ သူ့သာဝကလေးတွေဆီက “ထေရ၀ါဒဖြစ်ပြီး ဘုန်းကြီးရဟန်းတွေကိုယ်တိုင် က ဘာဖြစ်လို့ နေ့နံသင့်နာမည်တွေ စဉ်းစားရွေးချယ်ကြသလဲ၊ ဘယ်ခေတ်က ဒီယဉ်ကျေးမှု စတင်ခဲ့သလဲ ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ တက်မလာတာတော့ ကံကောင်းသွားတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း စာသင်ခန်းထဲက ထွက်လာမှ တွေးမိလို့။ သာသနာ့တက္တသိုလ်ဂုရုကြီးတစ်ပါးကလည်း ဒီလိုအတွေးမျိုးလေး လမ်းစခဲ့ဖူးတာ မှတ်သားဖူးပါရဲ့။ဂုရုကြီးကိုယ်တိုင်က မေးခွန်းနားမှာပဲ ကပ်ဆင်းသွားတာမို့ သူကိုယ်တိုင်လည်း အဖြေမှတ်တိုင် ထိ မလိုက်ခဲ့မိတော့ဘူး။
အော် နေ့နံသင့်အက္ခရာသင်္ကေတလေးတွေနဲ့ မှတ်ထားမိတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေး။ “ကိုသီ တိုက်သစ်က” “ ၂၆၇၆၂”။ သူ့အတွက်တော့ ဒီဖုန်းလေးက အများကြီးအလုပ်မလုပ်ခဲ့ရရှာပါဘူး။ နေခဲ့တဲ့ လေးနှစ်တာအတွင်းမှာ သုံးကြိမ်လောက်ပဲ သူ့နာမည်ကို ဖုန်းလေးက ရှာခဲ့ဖူးတာပါ။ စာသင်သားတွေအများကြီးကြားထဲမှာ ဖုန်းခေါ်သံပိုင်ရှင်ကို မတွေ့တွေ့အောင် လိုက်ရှာပေးတဲ့ ဖုန်းစောင့်ကိုယ်တော်ကြီးကိုယ်တော်လေးတွေက လည်း ကျေးဇူးတင်စရာပါ။ ဆရာတော်ကြီးသီတင်းသုံးတဲ့ ကျောင်းမှာ ဖုန်းကရှိတာမို့ လိုတိုရှင်း ပြောရလေ့ရှိပါတယ်။ ကြူတာ မူတာ နွဲ့တာ လှည့်တာများ အလျင်းမရှိစေရ။
တကယ်ပါပဲ ဒီဖုန်းလေးက စာချစာသင်သံဃာတော်အရှင်တွေရဲ့ ပုဂ္ဂလိကအရေးအရာတွေအတွက်သာမက သာသနာတော်အတွက်၊ တိုင်းပြည် အတွက်ပါ အများကြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ရကြောင်း သမိုင်းရေး ထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မစိုးရိမ် တိုက်သစ်မှာ နာယကဆရာတော်ကြီးသုံးပါး စီမံအုပ်ချုပ်တော်မူကြောင်း စကားစပ်မိတိုင်း ပြောပြခဲဖူးပါပြီ။ သိက္ခာတော်အကြီးမားဆုံးဆရာတော်ကြီး ဦးသီရိန်(အဂ္ဂါဘိဓဇ)က နိုင်ငံတော်သံဃ မဟာနာယကအဖြစ်နဲ့ ရန်ကုန်ကမ္ဘာအေးမှာ သာသနာရေးတာဝန်နဲ့ သွားရောက်သီတင်းသုံးရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒုတိယဆရာတော် ဦးနာယကတော့ အသံတော်တိတ်စွာ အေးအေးချမ်းချမ်းပဲ စာပေနဲ့ မွေ့နေလေ့ရှိပါတယ်။
တတိယသက်တော်အငယ်ဆုံးဆရာတော်ဦးရာဇဓမ္မ(ယခုလက်ရှိဆရာတော်ကြီး)ကတော့ ထက်မြက်ခေတ်မီစွာ လောကဓမ္မနှစ်ဌာနလုံးကို ဦးဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ရဲ့ သြဇာအရှိဆုံးဆရာတော်များစာရင်းမှာ ထင်းထင်းကြီး ရေးထွင်းရမှာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဆိတ်ဖလူးနံ့တို့ နရသိန်တို့ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်း ၀င်ခဲ့ရတာဖြစ်မှာပါပဲ။
ဆရာတော်အရှင်ရာဇဓမ္မရဲ့ သြ၀ါဒကောက်နှုတ်ချက်လေးကို ပြန်လှန်ဖြစ်ပါတယ်။
“အေး အဲဒီ သုံးပါးက ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တက်ညီလက်ညီ သာသနာပြုတယ် ဟုတ်လား၊ အဲသလို သာသနာပြုလို့ ဒီတိုက်ကြီး ဒီလောက်တိုးတက်လာတာ ဟုတ်လား၊ အဲဒါ ဘေးက ဘယ်လောက်ထိအောင် အနှောက်အယှက်တွေပေးကြသလဲဆိုတော့ ဟိုအရေးအခင်းကိစ္စ(ရှစ်လေးလုံးကို ရည်ညွှန်း)တုန်းက တိုက်သစ် က ဘုန်းကြီးဦးသီရိန်ကို လက်မခံတော့ဘူး၊ သူက ရန်ကုန်ရောက်နေတာကိုးကွ၊ ဟုတ်လား၊ ရန်ကုန်ရောက် နေတော့ တိုက်သစ်က ဘုန်းကြီးဦးသီရိန်ကို လက်မခံတော့ဘူးတဲ့၊ ဒါ နိုင်ငံရေးပယောဂ၊”
နိုင်ငံရေးပယောဂဆိုတာ နိုင်ငံရေးချည်းမထင်နဲ့ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားပါကောင်းပါလိမ့်မယ်။ အေး ဒီအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားဆိုတာ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ညီညွတ်နေတာ အင်မတန်ကြောက်တာပေါ့ ဟုတ်လား၊အေး ကွဲပြားမှ၊ ဒါက ဗြိတိသျှအစိုးရအဆက်ဆက် ဒီအတိုင်းပဲကွ၊ ဟုတ်လား၊ မကွဲကွဲအောင် သူတို့က လုပ်မှာ၊”
“အဲဒီတော့ ဘုန်းကြီးဦးသီရိန်က ရန်ကုန်မှာ ၀ါဆိုတယ်၊ ၀ါဆိုတော့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်က ဘုန်းကြီး ဦးသီရိန်လက်မခံဘူးတဲ့။ ဒါကို မြို့ထဲ လျှောက်လွှင့်တယ် ဟုတ်လား၊ သူတို့ကသာ လက်မခံဘူး လွှင့်နေတာ၊ ငါနဲ့ ဘုန်းကြီးဦးသီရိန်က ဖုန်းအဆက်သွယ်အမြဲတမ်းရှိတယ်။ ဟေ့ ဘယ်လိုလုပ် ဘယ်လိုလုပ်၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား သူကလည်း၊ ငါကလည်း ဘာတွေ လုပ်ထားတယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့၊ အဲလိုဖုန်းအဆက်အသွယ်က အမြဲတမ်းရှိတယ်၊ဟုတ်လား၊”
“နောက်ဆုံး မင်းတို့ပြောပြမယ်၊ (၇-၈-၈၈)နေ့က တိုက်ဟောင်း(မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်ကြီး)ထဲမှာ ဦးညိုဝင်း(မန္တလေးတိုင်းပြည်သူ့ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ)ကို ဖမ်းထားတာ၊ အဲဒီဖမ်းထားတာ ငါက ကမ္ဘာအေးက ဖုန်းဆက်မှ သိရတာ၊ သိကို မသိဘူး၊ ဒီမှာက ငါက စာအံခိုင်းပြီးတော့ စာသင်သားတွေ စစ်နေတာဟုတ်လား၊ စာသင်သားတွေ ပြည့်ရဲ့လား၊ စာအံကျောင်းမှာ စုံရဲ့လားဆိုပြီးတော့ စစ်နေတာ၊ ကမ္ဘာအေးက ဖုန်းဆက်လို့ ကိုညိုဝင်းဖမ်းခံရတယ် ဆိုတာငါသိရတာ၊ ဟာ ဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်ညာရယ် မသိသေးဘူး၊ သိအောင် တိုက်ဟောင်းသွားပြီးတော့ “ အဆိုးထဲက သက်သာသောအဆိုးဖြစ်အောင် လုပ်မယ်” ငါဒီလောက်ပဲ တာဝန်ယူပါတယ်။
အဲ ကောင်းပြီ၊ လုံးဝကောင်းလာပါစေ့မယ်လို့ တာဝန်မယူဘူး၊ အဆိုးထဲက သက်သာသော အဆိုးဖြစ်အောင် လုပ်ပါ့မယ်။ ဟုတ်လား၊ အဲသလို ပြန်လိုက်တယ် ဖုန်း။” ကမ္ဘာအေးကပြီးတော့ တိုင်းကောင်းစီမောင်ဘတူ ဗိုလ်မှူးဘတူ၊ သူကအတွင်းရေးမှူးမဟုတ်လား၊ မောင်ဘတူက ငါ့ဆီ ဖုန်းဆက်ပြန်ရော၊ “ ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော်တို့ ဥက္ကဋ္ဌတော့ အဖမ်းခံထားရတယ်ပေါ့၊ ဆရာတော်ကြည့်ပြီးတော့ ရှင်းပေးပါဦး၊”
“ အေး ငါလည်း ခုပဲ ရန်ကုန်က ဖုန်းရလို့ ငါ အခုပဲ သွားမယ်၊ ဆယ်မိနစ်လောက်တော့ ကြာတယ်၊ ဒီအတွင်းမှာ မင်းတို့ကလည်း စိတ်လိုက်မာန်ပါ မလုပ်နဲ့၊ ငါ အဆိုးထဲက သက်သာသော အဆိုးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမယ် ဟုတ်လား၊ အဲဒီလိုပြောပြီးတော့ သွားလိုက်တယ်။ သွားလိုက်တော့ အကုန်ရှင်းသွားတယ်ဆိုပါစို့ကွာ”
“ဆိုလိုရင်းက ဘေးကသာ ၀ိုင်းပြီးတော့ မြှောက်ပေးတယ်၊ တိုက်ကြီးကွဲအောင် လုပ်နေတယ်၊ ဒို့သုံးပါးက လုံးဝမကွဲဘူး၊”
အော် “ကိုသီတိုက်သစ်က”။ ဖုန်းနံပါတ်လေး ၂၆၇၆၂ ၊ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးစတော့မယ့် တစ်ရက်အလိုမှာ မန္တလေးမြို့ကြီးမီးဟုန်းဟုန်းတောက်သွားစေနိုင်တဲ့ သွေးမျက်ရည်မြစ်ကြီးစီးသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်လိုက်တဲ့ တယ်လီဖုန်းလေး။
ဒါပေမယ့် ဆရာတော်ကတော့ အဲဒီအရေးအခင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ သီးသန့်ပင့်ခေါ်ရာဆီ ကြွခဲ့ရရှာပါတယ်။ နေလနက္ခတ်တွေ လည်ပတ်မှုကင်းရာ ကမ္ဘာမြေပြားရာဆီ။ The world is flat. ကသိုဏ်းကို သုံးနှစ်တာမျှ တကိုယ်တော်စီးဖြန်းခဲ့ရှာပါတယ်။
ဒီအကြောင်းလေးကို ဆရာတော်က အမှတ်ရစွာ ပြောပြပါသေးတယ်။
“ အဲဒီနောက် ငါက ရှေးဘ၀တုန်းက ကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တော့ ထောင်ထဲရောက်သွားရော၊ ကုသိုလ်လုပ်လို့ ထောင်ထဲရောက်သွားတာ၊ ဟုတ်လား၊ မင်း“ ဗောဓိပင်ပျိုးလို့ ပေါင်ကျိုးတယ်” ဆိုတာကြားဖူးလား၊ ဗောဓိပင်စိုက်ရင် ကုသိုလ်ရမှာကွ၊ အဲဒါ ပေါင်ကျိုးသတဲ့၊ အဲဒါတစ်ခြားမဟုတ်ဘူးကွ၊ ဗောဓိပင်ပျိုးတဲ့ ကုသိုလ်ခံလို့ ပေါင်ပဲ ကျိုးတာတဲ့၊ ဗောဓိပင်သာ မပျိုးဘူးဆိုရင် သေကို သေမှာကွ၊ အေး ငါလည်း ဗောဓိပင်ပျိုးလို့ ပေါင်ကျိုးတာဟုတ်လား၊”
“ အေး ငါက လူထုလည်းပဲ သတ်တာဖြတ်တာတွေ မဖြစ်အောင် ပြောတယ်၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ပြောတယ်ပေါ့ကွာ၊ သူတို့လည်းပဲ ပြောတယ်၊ မင်းတို့ ရမ်းမပစ်နဲ့၊ လူထုကိုလည်း သိပ်ပြီးတော့ မင်းတို့မစော်ကားကြနဲ့ ဟုတ်လား၊ အဲလိုဆိုရင် အကုန်လုံး ဒုက္ခဖြစ်ကုန်မယ်၊ ငါလည်း လူထုလည်း ပြော၊ အထက်အာဏာပိုင်အဖွဲ့လည်း ပြောတယ်၊ အဲဒီတော့ ငါ့ငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ ဆိုပြီး ဦးစောမောင်တို့က ထောင်ချတယ်ပေါ့ကွာ၊ ကိုစောမောင်လက်ထက်မှာ၊ ဒါ မောင်ခင်ညွန်ရဲ့ ကုသိုလ် ကောင်းမှုဟုတ်လား၊”
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ တယ်လီဖုန်းလေး ရှိနေဦးမှာပါ။
လှတာတော့ လှနေတာပ။ အလှတရားတွေ ကိုယ်ဆီရှိနေတော့ မလှတာတွေ ဘေးရောက်တာမဆန်းပါဘူး။ ဆန်လိုချင်တာ ဖွဲလိုချင်တာမှ မဟုတ်တာ။ အင်း သိသူက သိနေဦးမှာပါပဲ။ အပိုပြောတော့ ညိုချောက လှမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ မျှော်နေမိ အဆက်.... အဆက်။
အောင်ကျော်ရေထမ်း ကျောက်ဆောင်စမ်း တဲ့ ။ ရှင်လေးမော် ရွာတည်တဲ့ နှစ်ပါ။ စွန်ကြိုးညိလို့ ဈန်လျှော သတဲ့။ ဟုတ်လား။ စကြာဝတေး မင်း ဖြစ်မယ့်သူတွေ သိန်း ငါးရာဆုလောက်နဲ့ကျေနပ်ရသတဲ့ ဟုတ်လား။ အဲဒါ ကံကံရဲ့ အကျိုးဆိုတာ အဲဒါပဲ ဟုတ်လား။ တဒင်္ဂ အမြင်လေးနဲ့ သွာမဆုံးဖြတ်ကျနဲ့ဟုတ်လား။ ခင်လေး ကို ဂလု ခဲ့ရတဲ့ နှစ်တွေ ချစ်ဦးလေး အိပ်ပြီ ဆိုပြီး အက္ခရာနဲ့ ဖလှယ်မှတ်မိသတဲ့ ဟုတ်လား။ စွန်ကြိုးကို ဖြတ်ဖို့ တော့ မကြိုးစားနိုင်ဘူး။ ကြည့်ထားတဲ့ တရုတ်ရှောင်လင်သိုင်းပဲ ကောင်းကောင်း အသုံးကျ အောင် ကြိုးစားမယ်။ ဟုတ်လား။ ဂလု...ဂလု... လကုန်ပြီ.....
ကိုသီတိုက်သစ်က (၂၆၇၆၂)။ ဒီဂဏန်းလေးတွေကို စိတ်ထဲမှာ ရင်နှီးနေပါတယ်လို့ အောင့်မေ့နေတာ။ မစိုးရိမ်က ရွာသားကို ဆက်သွယ်စရာ ဖုန်းနံပါတ် ဖြစ်နေတာကိုး။ တင်ပြပုံလေး အရမ်းကောင်းပါတယ်ဘုရား...
u zin bayah,
I am from mandalay working outside myanmar! After reading yur article byachance, it is really touching my heart.
I do not haveamyanmar font and how to type in myanmar, so very sorry for that but i really appreciate yur themes which u describe our hero, ma soe yein saya taw gyi!
I miss sayataw gyi very much and i hope u can write suchakind of beautiful and touching articles more!
thank you very much ba yah!